बेहोस भएको नाटक गरेर भाइरल झाक्रीले बेलबारी छोड्नुको भित्रि कारण खुल्यो, डिबिले पैसा खाएकै हुन त ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 12, 2021 AdminLeaveaComment on बेहोस भएको नाटक गरेर भाइरल झाक्रीले बेलबारी छोड्नुको भित्रि कारण खुल्यो, डिबिले पैसा खाएकै हुन त ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
मोरंग । कुरा सुन्दा फिल्म अथवा मनोगडन्ते हावा कुरा जस्तो लागेपनी बास्तबमै मोरङको बेलबारिमा कसैले सोच्नै नसकिने घ’टना घटेको छ । एकाएक सबै गाउँले बि’रामी पर्दै आत्मा पसेर दु’ख दिन थालेपछि गाउँ नै चि’न्तामा परेको थियो । करिब छ बर्ष अगाडी मृ’त्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्र’सित बनेको थियो ।
बच्चादेखि वृद्ध सबै बिरा’मी परेपछी धामी ले चिन्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धामीलाई कु’टपि’ट समेत गरेका थिए । चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घ’टनामा नि’धन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको १२ बजे चिहान खनेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धामीलाई माफी मागेर सम्मान समेत गरेका छन ।
अहिले फेरी झाक्री बारे बिबाद आएको छ । झाक्रीको पैसा अभियानता डिबि लिम्बुले खाएको भन्दै आरोप लागेको छ । के हो त सत्यता ? अहिले झाक्रीले पनि बेलबारी छोडेर आफ्नो ग्रिह जिल्ला ताप्लेजुङ्ग गएका छन् । भिडियोमा जस्ताको त्यस्तै हेर्नुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः